Filan-dratsy mamoafady Ny rainy ihany no nanolana ilay zazavavy 7 taona
Anio no voalaza fa hiakatra fampanoavana ilay ray mpanolana, raha vita antsakany sy andavany ny famotoran’ny mpitandro filaminana. Ny ray niteraka azy ihany no nahavanon-doza nanolana an’ i
Zeberthine, zazavavy kely mandray 7 taona, avy ao Etrotroke Atsimo, Distrikan’ny Farafangana.
Nilaza ny reniny fa mpisipa izy ireo ka nitoe-jaza, nanana ity menakiniainy ity.Tonga mitsidika
matetika io rainy io. Sendra tsy tao an-tranony ravehivavy no nanampatra ny filan-dratsiny tamin’ilay
zaza io rainy io. Nitaraina tamin’ny reniny ilay zaza izay narary fa nanatanterahan’ny dadany
kivadivady. Nampilaza ny mponina teo an-tanana avy hatrany ilay renim-pianakaviana. Efa nikasa hanatanteraka fitsaram-bahoaka ny fokonolona fa nosakan’ny manam-pahefana ara-drazana teo an-toerana ary nampandre ny zandary avy hatrany. Nentin’ny reniny teo amin’ny hopitalin’ny Farafangana ny alakamisy teo ity zaza ity, ary volaza fa simba tanteraka. Tsy nisy ny vola ka olo-miantra, antsoina hoe : “Razafy” no nanome sakafo azy mianaka sy nampandre ny tomponandraikitra ara-panjakana. Afak’omaly tamin’ny 5 hariva vao vory ny vola ka izay vao nahiditra efitra fandidiana ilay zazavavy kely. Ireo tsara sitrapo izay antra amin’izao fijalian’izy mianaka izao, indrindra ny fangirifian’ I Zeberthine kely dia afaka miantso na mandefa M’vola amin’ny 034 39 404 58. Ireo any an-toerana kosa afaka manatona mivantana ao amin’ny hopitalin’ny Farafangana.